Top 5 Free Watermark Software inay dar Watermarks in Your Photos
> Resource > Free > Top 5 Free Photo Watermark Software
Ma rabtaa in aad watermarks dari aad sawirradaada in laga ilaaliyo images khalad ah loo isticmaalayo ama la koobiyeyn? Software watermark Photo kaa caawin kara inaad watermarks text ama image shakhsiga dari aad sawirradaada si aad u ilaaliso copyright. Waxaa jira qaar ka mid ah software watermark free weyn oo qodobkan ku taxan software watermark ugu fiican 5 sawir free comments iyo sanamyadii in lagu daro in sawiradaada.
Free Watermark Software software Image 1. TSR Watermark
Software Image TSR Watermark waa software watermark lacag la'aan ah ku darto qoraal, sawir ama logo watermarks inay sawiro in Dufcaddii fudayd si deg deg ah. Heerka style watermark, asalka iyo daahfurnaanta iyo midabka la beddeli karaa si xor ah. Waxaa ka shaqeeya Windows XP, server Windows 2003, Windows server 2008, Windows Vista, iyo Windows 7 - la .net qaabka 2.0 ama wax ka sareeya.
Alamoon Watermark waa software watermarking awood leh oo lacag la'aan ah kaas oo awood kuu inay watermarks daro inay sawiro in Dufcaddii in ilbiriqsi. Qaabab sawir Major si fiican u taageeray. Sidaa daraadeed, waxaad ku dari kartaa qoraalka, logo, ama URL in aad images sida aad jeceshahay in aad ilaaliso copyright.
Watermark Free Software 3. PicMarkr
PicMarkr waa aalad kale oo faa'iido leh oo weyn sawir free abaabulka in lagu daro watermark in aad sawiro digital. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad si xor ah ku darto image ama text watermarks in aad sawir online. Waxa kale oo aad isticmaali karto si aad dajiyaan sawiro ka Flickr, Picasa, Facebook, iwm iyo sawiro ka your computer geliyaan. Ka dib markii aad dhammaysay ku daray watermarks, aad si toos ah u gali kartaa oo aad la wadaagto images in Flickr ama download ka photos online si aad u computer. Photo resizing sidoo kale waa la heli karaa.
Software Free 4. Mark watermark Lite
uMark Lite waa software ah image free watermarking ku darto watermarks text ama logo customizable in aad sawiro digital. Waxa ay taageertaa BMP, JPG, GIF, PNG iyo TIFF. Watermark Dufcaddii ku daray waa la heli karaa, laakiin in ka badan 50 photos aan waqti. uMark Lite waa freeware ah iyo hawlaha qaar ka mid ah way xadidan tahay. uMark Pro waa version sare ee uMark Lite leh in ka sii badan, laakiin aad leedahay si aad bixiso.
waterMark V2 waa codsi ah u fududahay in la isticmaalo watermaking ku darto image watermarks in ay sawiro aad. Just qeexo image ah sida watermark iyo meel meel kasta oo aad rabto in aad sawirka aad rabto in aad ku darto oo ku saabsan. Transparency ee image watermark la beddeli karaa si xor ah. Howlgal Dufcaddii waa qaabab image la heli karo iyo taageeray waa BMP, jpeg, PNG iyo TIFF.
By jidkii, haddii aad wax badan oo sawiro, waxaad samayn kartaa DVD sawir slideshow ah inay si fiican u ilaasho, iyo wadaagaan sawir xasuus aad la software slideshow .